पाटन उच्च अदालतका मुख्यन्यायाधीश चोख्खै ?
उच्च अदालत बिराटनगरका मुख्य न्यायाधीश डा. कुलरत्न भूर्तेलसहित ७ न्यायाधीश ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा जिल्ला अदालत मोरङको थुनछेक आदेश उल्ट्याउँदै छाडेको आरोपमा तानिए । सुरुमा नागेन्द्र लाभ कर्ण, थीरबहादुर कार्की, उमेशकुमार सिंह, उमेशराज पौडेल र सारंगा सुवेदीसहित ५ न्यायाधीश तानिए । त्यसपछि साँघु साप्ताहिकले नै सुनकाण्डका आरोपी छाड्न एकै लगाउका मुद्दा छरेर पेशी तोक्ने मुख्य न्यायाधीश भूर्तेल र पाँच न्यायाधीशकै जस्तो आरोपीलाई छाड्ने साधुराम सापकोटा र जनक पाण्डेलाई नतानिएकोबारेमा समाचार प्रकाशित ग¥यो । साँघुमा समाचार प्रकाशित भएकै दिन मुख्यन्यायाधीश भूर्तेल तानिए । त्यसपछि क्रमशः न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र साधुराम सापकोटा पनि तानिएका थिए ।
त्यस्तै, नेपाल इन्जीनीयरिङ कलेजका संचालक डा. लम्बोदर न्यौपानेलगायतले डेढ अर्ब सम्पत्ति कब्जा गर्नका लागि खारेज भएको प्रालि ब्यूँताउन उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दिए । बिचौलिया एक चर्चित ठेकेदारले उक्त मुद्दा जिताउने जिम्मा पाए । ती ठेकेदारले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानासँग कनेक्सन मिलाएर न्यायाधीशद्वय रेवन्त कुँवर र अग्निप्रसाद थपलियाकोमा पेशी तोकिदिए । बिचौलियाले न्यायाधीश कुँवरसँग सेटिङ गरिसकेका थिए ।
सामाजिक संस्थाको रुपमा गैरनाफामूलक कलेज हत्याउने लम्बोदर न्यौपानेकै पक्षमा अन्तरिम आदेश उच्च अदालतले दियो । खारेज भइसकेको प्रालि ब्यूँताउने पक्षमा अन्तरिम आदेश दिने न्यायाधीश कुँवर र पेशी तोक्ने मुख्य न्यायाधीश ढुंगाना अहिलेसम्म पनि तानिएका छैनन् । राजनारायण पाठकले उजुरी तामेलीमा हाल्न नसकेपछि कलेजका संचालकहरू अदालतबाट खारेज भएको प्रालि ब्यूँताउनका लागि करोडौंको थैली बोकेर बिचौलियामार्फत् उच्च अदालतमा पुगेका थिए । उच्च अदालत र सर्वोच्च दुवैतिर मिलाउने जिम्मा पाएका ठेकेदारले उच्चबाट अन्तरिम आदेश पाए पनि सर्वोच्चले २०७५ माघ दोस्रोसाता उक्त अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश भएको बेला प्रालि ब्यूँताउने पक्षमा आदेश गराउन खोज्दा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले चलखेल बुझेर मुद्दा नै सारेका कारण बिचौलियाको योजना तुहिन पुगेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश मिश्रले उक्त मुद्दा आफ्नै पालामा आदेश गराउने धेरै बल गरेका थिए ।
मिश्रको अवकाशपछि सुनकाण्डदेखि विभिन्न काण्डमा न्यायाधीशहरू तानिन थालेपछि नेपाल इन्जीनीयरिङ कलेज हत्याउने न्यौपाने समूहको प्रालि ब्यूँताउने योजनामा तुषारापात हुँदै गएको छ । यही बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकले नेपाल इन्जीनीयरिङ कलेजको प्रालि ब्यूँताउने निर्णय र डेढ अर्ब सम्पत्ति कब्जा गर्ने उद्देश्यले ७८ लाख रुपैयाँ घुस दिएको भिडियो सार्वजनिक भयो ।
– दर्शना रिमाल, सामाखुसी, काठमाडौं ।